BORIBORINTANY FAHATELO Nohavaozina ny fomba fiasa iadiana amin’ireo mpanao kolikoly
Nohavaozina tanteraka ny fomba fiasa eo anivon’ny boriborintany fahatelo mba hifanaraka amin’ny veliranon’Iarivo, raha araka ny
fanazavan’ny lehiben’ny boriborintany vaovao ao an-toerana Ramiandrisoa Lalaina. Ao anatin’ny ora iray dia vita ny « bulletin de naissance » na fanamarinam-pahaterahana raha tsy maintsy miandry 24 ora kosa izany ho an’ireo maka kopia lava. Tsy maintsy mbola karohina mantsy ny boky mirakitra ny anaran’ilay olona hakana ilay kopia, hoy ity tompon’andraikitra ity. Vita eo no ho eo kosa raha araka ny fanazavany hatrany ny “certification » sy ny « legalisation » izay nosarahina mihitsy ireo tompon’andraikitra misahana izany raha nitambatra teo aloha. Nampitomboina ihany koa ireo olona mandray an-tanana ireo mpikarakara antontan-taratasy hisorohana ireo mpanera mirotsaka an-tsehatra amin’ny fanaovana kolikoly ka manakorontana ny fizotry ny asa eny anivon’ny boriborintany. Tsiahivina moa fa efa nasiana “accueil” ihany koa na fandraisana eo anivon’ny Boriborintany fahatelo, hahafahana manoro lalana na hevitra ireo olona tonga mikarakara taratasy ao an-toerana.